Vanyori vakazvimirira II. Gabriel Romero de ilavila. Mibvunzo gumi | Zvazvino Zvinyorwa
Nyaya yechipiri yakatsaurirwa kune vanyori vanozvimiririra. Nhasi ndine Gabriel Romero de ilavila, zvakare ine midzi muLa Solana, asi yakanyanyisa kuglobetrotting uye ikozvino yakagara mukati Galicia, padhuze neRande zambuko. Munyori we Dhimoni Mambokadzi weRwizi Isis, inoshandawo se articulist mupepanhau redhijitari Vigo è.
Muedzo we 10 mibvunzo Gabriel Romero de Ávila anotiudza nezve ake mabhuku avanofarira uye vanyori, zvavanokanganisa, zvavanofarira, kuverenga kwavo, zvirongwa zvavo uye zvakaitika. Muchidimbu, zvinogara zvakanaka kuti uwane mamwe manzwi manzwi.
1 Gabriel Romero de Avila ndiani?
1.1 Dhimoni Mambokadzi weRwizi Isis
2.1 1. Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
2.2 2. Nderipi bhuku rekutanga rakakurova uye nei?
2.3 3. Ndiani munyori waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
2.4 4. Ndeupi munhu mubhuku raungadai uchida kusangana nekugadzira?
2.5 5. Chero zvivaraidzo kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
2.6 6. Uye nzvimbo yako yaunofarira uye nguva yekuzviita?
2.7 7. Ndeupi munyori kana bhuku rakakanganisa basa rako semunyori?
2.8 8.Mhando dzako dzaunofarira?
2.9 9. Chii chauri kuverenga izvozvi? Uye kunyora?
2.10 10. Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa ndechevanyori vakawanda sei varipo kana kuti vanoda kutsikisa?
2.11 Webhusaiti yaGabriel Romero de Avila
Gabriel Romero de Avila ndiani?
Ini ndakazvarwa pa Madrid, akadzidza Medicine uye ndakagara muLeeds, Newcastle, Tenerife nePontevedra, kuti ndigare muVigo, asi handina kumbokwanisa kumira kufamba.
Dhimoni Mambokadzi weRwizi Isis
Mumwedzi yekutanga ye 1852 MaBritish neOttoman Empires vanorwira kutora nyika yakanaka ye Nilidia. Ivo vachakurumidza kuziva kuti iyi hondo haizove nyore, apo mukurwira mweya nemigwagwa yeguta re Basser pindira zvinotyisa kutuka, one zvisaririra ane masimba emashiripiti, gavhuna anodanana nemukadzi wekumadokero, mukadzi ane jilted, a n'anga pro-varanda, pirates kubva parwizi Isis, redcoats, zvidzva hope dzakaipa uye Allan Quartermain.
Mumba mangu maigara muine mabhuku akawanda. Ndakakura ndine nyaya dze Andersen, ngano dze Samaniego uye enganonyorwa enganonyorwa dze Jules Verne, Arthur Conan Doyle naEmilio Salgari. Iwo aive mazuva iwayo pamberi pesainzi yemakomputa, apo isu tese taive tisina mhosva, paingova nemaviri chete terevhizheni uye hutsinye hwedu hukuru hwaive hwekuona maviri madhaimani mafirimu.
Nyaya yekutanga yandakanyora yaive yakashata kopi yaSherlock Holmes, umo maakango shandura mazita evatambi uye zano racho raive rinonhuwirira. Ndakazviita ndichishandisa tapureta yechinyakare yababa vangu uye nemamwe machira mahombe ekunyorera, uye ivo vaibva vandibatsira kuzvisimbisa. Ini ndichiri kuzvichengeta pamba (kungoita kukosha kwekusaziva, hongu, nekuti zvainyanyisa kutyisa).
Ndiri jaya ndakaverenga sandokan, iyo nyaya inondishamisa kwazvo kwemakore mazhinji, nekuti yakandiratidza kuti vakaipa vakanyanya kuomarara kupfuura vakanaka, uye kuti dzimwe nguva vane zvikonzero zvakawanda zvekuita zvavanoita. Kubva ipapo kunouya kuda kwangu gungwa. Ipapo ndakazoona kuti ndakatoita dzungu pazvikepe zveRetiro, uye ini ndaisakwanisa kuve pirate kuMalaysia. Saka ndakatanga kunyora.
Pakati pechinyakare ivo vanorasikirwa neni Salgari uye Hemingway. Asi ini ndinoyemurawo vamwe vazhinji, senge Steinbeck, bazi, Sabatini kana Anthony Tariro.
Pakati pezvazvino zvandinoda zviri Vazquez-Figueroa, Perez-Reverte y Javier Reverte. Ini ndinoteverawo E padhuzespido Freire neMáxim Huerta. ZVAKAITIKAlessandro Baricco zvinoshamisa.
Dambudziko rangu guru ndere tsvaga nzvimbo kumba kune mamwe mabhuku. Ini handisisina masherufu emahara, handina nguva muzuva rekuverenga zvimwe. Kana mumwe munhu aine chipi zvacho chezvinhu icho chasara, regai azvipe kwandiri.
Imwe yeakanyanya kunaka mavara mumabhuku enguva dzichangopfuura ndeye Diego Alatriste: anokudzwa uye ane hushingi, pamwe neyakaipa yenguva yake. Inotevera zvinotevera Lorenzo Falco, iyo inotamba nemativi ese uye ine shoma shoma yekupenya kwe 007.
Kana ndichiverenga, ndinowanzove nemoyo murefu zvishoma. Ini handisi kukwanisa kupedzisa bhuku risingandikochekere. Izvi ndizvo zvandinodaidza kuti "iyo 50 peji bvunzo": kana munzvimbo iyoyo ndisina kuwana zvinhu zvinondifadza, handina moyo murefu wekuenderera.
Kana uchinyora, zvimwe kana zvishoma zvakafanana chinhu chinoitika kwandiri. Ndosaka ndine zvinyorwa zviuru mumusoro mangu, asi kusarudzika kwechisikigo kunogonesa chete akanakisa (kana shanduko dzinovatendera kujairana nharaunda).
Kunyangwe ndakakura ndisina komputa, ikozvino ndave akapindwa muropa netekinoroji nyowani, uye nekutenda kwavari ndinogona kuverenga chero nguva: ndinotakura mabhuku panharembozha yangu kana piritsi uye ndinoshandisa chero chiitiko. Kunyangwe mumotokari, nekuda kweiyo audiobooks, ayo anga ari ekutsvaga kwangu kwakanyanya mumakore apfuura.
Nekunyora, chimwe chinhu chakafanana chinoitika kwandiri: hapana nguva yakarasika.
Ndakafunga kusatumidza zita rekuti Salgari zvakare, saka izvozvi ndichadzokorora Hemingway: hakuna munhu anodzidzisa madhirogu (uye anonyaradza) saiye. Rimwe nerimwe remapeji aro rizere nemashiripiti. Uye zvakandidzidzisa izvo nyaya huru inogona kutaurwa munzvimbo diki kwazvo.
Ndakaverenga mhando dzakasiyana kwazvo, asi ndinonamata kunakidzwa uye kufamba kwenoverengekas. Zvakare iyo nhoroondo yenhau uye noir genre. Kunyangwe imwe tsika, asi kwete yakawandisa.
Gore rino ndakatanga hunyanzvi hwe "Zvikepe zvekunyora": isa euro imwe muhari yebhuku rega rega raunoverenga, uye iyo mari inogona kutorwa chete pakupera kwegore, uye inogona kungoshandiswa pamamwe mabhuku. Ndatochengetedza makumi maviri ema euro kusvika zvino gore rino, saka kupindwa muropa kwangu kucharamba kuchikura. Izvozvi ndiri kutanga ScaramouchenaRafael Sabatini; Y Ruva rerenjenaWarris Dirie.
Nezve kunyora, ndiri kuongorora hupenyu hwe madzinza anotama-tama erenje reSahara, kupararira kweIslam munzvimbo idzi nekupokana pakati pe Bharbari corsairs and the Knights dzeMalta. Ini ndinogona kuve neanovel yakagadzirira munguva pfupi. Kana makumi maviri, nekuti nyaya idzodzo dzaizoenda kure.
Ine zvakawanda zvakanaka uye zvimwe zvinokanganisa. IInternet yakapa mukana wevanyori vanogona ikozvino nyore kubata vaparidzi, vanozvishambadza, vanozvisimudzira, vanoratidza basa ravo, nezvimwe. Nyika yekunyora yakachinja zvakanyanya, asi vaverengi vakachinjawo. Isu tese tinodzidza mitsva mitsva, dzimwe nguva pane nhunzi. Asi inguva inonakidza. Iko hakuna kumbove nekuita kwakawanda kwazvo, vanyori vakawanda uye basa rakawanda kuita. Uye ndiri kunakidzwa zvakanyanya.
Webhusaiti yaGabriel Romero de Avila
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Vanyori vakazvimirira II. Gabriel Romero de ilavila. 10 mibvunzo